Amanzi ama-Aquariums Amanzi amaDummies Cheat Sheet
NguMaddy Hargrove, uMic Hargrove
Ukuqala nokugcina i-aquarium enamanzi amatsha, awudingi itanki kuphela, kodwa nezinye izixhobo eziyimfuneko ukugcina amanzi ehlala abantu abahlala ezintlanzini. Xa uthenga ezo ntlanzi, qiniseka ukuba uya kumthengisi olungileyo kwaye uthenga iintlanzi ezisempilweni. Kwaye xa ezo ntlanzi zisempilweni zigula, njengoko abanye benako, cofa kumayeza alula kweli Cheat Sheet ukunceda ukubabuyisela empilweni.
© Ngu-SF / Shutterstock.com
amayeza amiselwe isicaphucaphu
Intlanzi elungileyo yaManzi aManzi yaBaqalayo
Uqala i-aquarium enamanzi amatsha kwaye kufuneka wazi ukuba loluphi uhlobo lwentlanzi ukuyifaka esitokisini. Iintlanzi kolu luhlu lulandelayo ziintlobo ezilungileyo zentlanzi yamanzi amatsha kwabaqalayo:
Isitya sendalo saseTshayina
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo xa uthenga iintlanzi zasemanzini
Ukuthenga iintlanzi kwi-aquarium yakho yamanzi amnandi lithuba lokhenketho olonwabisayo kwivenkile yezilwanyana zasekhaya, okanye uphando olunomdla kwi-Intanethi. Njengoko ukhetha ukuloba intlanzi, jonga kwiimpawu ezikolu luhlu lulandelayo ukuze ubone ukuba intlanzi isempilweni na:
Umbala womzimba ucebile, awupheli okanye awunangqondo. Umbala kufuneka uphelele kwaye ungalahleki nakweyiphi na indawo yolo hlobo.
Akukho zilonda zivulekileyo, izilonda ezibonakalayo, amathumba, okanye iingxaki zesikhumba ezibonakalayo njengokulinganisa ixolo okanye amabala.
Iimpiko zide kwaye ziyahamba okanye zimfutshane kwaye zime nkqo kolo didi. Iintlanzi akufuneki zibenamaphiko amadlakadlaka, akrazukileyo, okanye alahlekileyo.
Isikali sithe tyaba kwaye agudileyo, asikhupheli kude emzimbeni.
Isisu sijikelezwe kakuhle ziintlobo, asitshonanga okanye sigqibelele.
Isingqini somzimba uphela ubungakanani obuqhelekileyo, awudumbanga okanye ubhitye.
I-excreta ebonakalayo (inkunkuma yentlanzi) kufuneka ibe mnyama ngombala, ingabi bumthubi.
Onke amaphiko asemzimbeni wentlanzi akufuneki awe okanye abambe ngokupheleleyo.
Amehlo acacile, akakho mnyama, kwaye awaphumi kwiziseko zawo.
Akukho zinambuzane zibonakalayo, ezifana ich okanye velvet.
Into oyifunayo ukuseta iNkqubo yoLwandle lwe-Aquarium
Xa uthatha isigqibo sokuseta i-aquarium yasemanzini, uzibophelela ekufumaneni inani lezinto ngaphandle kwentlanzi. Udinga izixhobo kunye nokubonelela ukunceda ukugcina imeko ye-aquarium isempilweni kwintlanzi yakho. Sebenzisa olu luhlu lulandelayo lokuthenga ukuze uqwalasele xa uphuma uyokufumana itanki lakho lamanzi asisiseko:
Itanki kwaye yima
Isifudumezi kunye nobushushu
Impompo yomoya (ukuba iyafuneka ukunika amandla isihluzo okanye umhombiso)
Ikhithi yokuvavanya amanzi
Amayeza aqhelekileyo aManzi oLwandle
Ngamanye amaxesha iintlanzi zakho zamanzi acocekileyo ziyagula. Ukuba uqaphela iimpawu zokugula, zama la malungiselelo alandelayo - uninzi lwawo zizicelo ozisebenzisayo kwitanki yonke - ukunyanga iintlanzi zakho ezigulayo.
I-Acriflavine: Ukuphatha iich kunye nevelvet, kodwa inokujika amanzi abe luhlaza.
IFormalin: Unyango lohlobo lokuhlambela kuphela, akufuneki lusetyenziswe kwitanki ephambili. Unyango olukhulu lwee-parasites, alusebenzi kakuhle kusulelo lwangaphakathi kwaye lunokuba yityhefu enkulu, ke qiniseka ukuba unxiba iigloves.
Uhlaza lweMalachite: Sebenzisa eli yeza lilungileyo ukunyanga ivelvet, ukungunda kunye ne-ich.
I-Methylene eluhlaza okwesibhakabhaka: Yisebenzise ukuphatha ich, fungus, kunye nevelvet.
IPenicillin: Unyango losulelo lwebacteria kwaye ayinabungozi.
Ityuwa: Itafile yetyuwa eqhelekileyo isetyenziselwa ukunyanga ich kunye nezinye izifo ezibangelwa sisidleleli.
Itetracycline: Le ntsholongwane ilungele usulelo lwebacteria kwaye ayinabungozi.
Iimpawu zabathengisi beentlanzi ezilungileyo
Njengoko uthenga kubaqeshi be-aquarium yakho, khangela umthengisi weentlanzi othengisa intlanzi esempilweni kwaye angakunika ulwazi kunye noncedo xa ulufuna. Umthengisi weentlanzi ofanelekileyo unezi zinto zilandelayo:
umbungu wokuthumela x plus
Coca iitanki kunye nevenkile
Banobuhlobo, baluncedo, banolwazi ngabasebenzi abaphendula imibuzo yakho, abenza konke okusemandleni abo ukunceda, kwaye abaqhelene nezixhobo, indibano yenkqubo, kunye neemfuno zentlanzi nganye
Ukukhetha okukhulu kwezixhobo ze-aquarium, ukutya, amayeza, kunye neentlanzi kwisitokhwe
Iinkonzo zasimahla, ezinje ngokuvavanywa kwamanzi
Isiqinisekiso kwintlanzi nakwizixhobo abazithengisayo
Ukuzimisela ukukwazisa ukuba ungayifumana phi into abangayithengisi
Uvavanyo lwentlanzi efileyo ukunceda ukufumanisa unobangela wokufa kunye neengcebiso ngamayeza ukunqanda isidingo sophando
Umdla wokwenene kuwe nakwii-aquarium zakho
Ungayithatha njani iAdderall
amagama apholileyo e-youtube angathathwanga
indlela yokutyala izithole zentsangu
nini ukuthatha i-metamucil kusasa okanye ebusuku
I-lanolin yokukhawuleza kwe-diaper
iziphumo ebezingalindelekanga ze-entyvio
ngaphezulu kweekhawuntari ze-chlamydia